Shacabka Boosaasood oo ka walaacsan Urta Kaluun farabadan oo ay Baddu soo tuftay – SBC
Shacabka Boosaasood oo ka walaacsan Urta Kaluun farabadan oo ay Baddu soo tuftay
Shacabweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland gaar ahaan kuwa degan deegaanada ka agdhow xeebta magaalada ayaa caabsho xoogleh ka muujiyay urta Kaluun ay badu soo tuftay.
Qaar ka mid ah dadweynaha degan xaafadaha ka agdhow badda sida xaafada Carab, xaafadda Laanta Hawada iyo xeebaha xaafadaha kale ayaa sheegay in ay si aad ah uga baqa qabaan kaluun aad u tiro badan oo ay baddu banaanka u soo tuftay islamarkaana uu si aad ah u saameeyay sixada urka lagana dareemayo inta badan Magaalada.
Ilaa iyo iminka lama yaqaano waxyaabaha kasbay dhacdadan oo noqoneysa tii labaad oo mudo yar ka dib lagu arko xeebta ku heerersan Magaalada Boosaaso .
Dadweynaha qaar ee magaalada ayaa hadii aad la kulanto kuu sheegaya in dhacdadan oo kale mudooyinkii ugu dambeeyay aan lagu arag Badda Boosaaso iyagoona kugu tilmaama in ay jirto waxyaabo kasbay in kaluunka uu badda soo noco.
Ma jirto cid ka tirsan Wasaaradaha ku shaqada leh Baddka ee Puntland oo ka hadlay dhacdadan marka laga reebo kalhore marka ay dhacday arintan oo ay ku sheegtay wasaarada baddka iyo dekedaha in ay jiraan xiliyo ay baddu sameyso dhacdooyin ceynkan oo kale ah.
Sikastaba ha ahaatee 3dii maalin ee ugu dambeysay waxaa siweyn loogaga dareemay xaafadaha ka agdhow badda Urka uu sameynayo kaluunkaasi banaanka u soo baxay, waxaana ay ka digeen laamaha caafimaadka in ay ka dhalankaraan waxyaabo wax u dhimi kara caafimaadka.
Waxaa KeeNaya In Kaluun Ku DhinTo
Isla Markaana Ay Baddu So TufTo
MalaayiinTa SunTa ah Iyo Qashinka
Ay Aduunka Ku Shubaan Badda SoomaLida
Maadaama Soomalida Aan Ilaalsan Karin
Badeeda Wax Nadaam Iyo Aqoon AH Aaney
Lahayn Marka Waxa XiTaa Halis Ku Jira
Bii ada Ama Hawada SomaLia Iyo Qof Ka
Cuna Kaluun XanuunSan Oo Sun LaGu Shubay
Dawlahada Ugu Badan Ee Sunta Ku Shuba
Badda Waxa Ka Mida Reer Galbeedka Iyo
Kuwa Nucler ka Iyo Shidaalka SamaysTa
anigu Waa Ii Cadahay Idinkana Idiin
Cadeeyey SomaLiyeey Idinkay Idin JirTa
Kalluunka Boosaaso ka soo Caaryey Noociisa waxaa la yiraahdaa Caydi xiliyadatan Baddu waa soo tuuftaa nooca kaluunka Caydiga la Yiraahdo. Badda Somalia in ay Dayacantahay waa dhab khayraadka in laga Xadoh Suntana lagu shubo balse Kalluunka soo caaryey waxa dhici kartah in wakhatigiisi lagu jiroh.
Kaluunka Baddu waxay usoo tuftay waa la ogayahay ee iska jira Reer Boosaasow kaluunka Sumaysan ama ka kecashada Biyihiina Sunta reer Galbeed-ku ku shubaayo, ayna isaga kiin dhigayaan wax cawimo idiin wada, intaas wax fool xun ayey wadaane iska jira fadlan.
Ku:wasarada kalumeysiga ee Puntland iyo Aqoonyahanada Reer Bosaso
Fadlan Kaluunka soo caariyay waxaad u gudbisaan isbitalka bosaso si loo baaro waxa sababay in uu soo caariyo.
NB: Hadii isbitaalada bosaso eeysan awood u laheeyn dhib ma lahan waxaa loo gudbinayaa imaradka ama wadan kale si looso baaro
waxaa waxaa sababay waa sunta badda lagu daadinayo waayo malihin dowlad awood leh . puntlandna waa ka seexaty oo waa calooshood u shaqaystayaal ,
waan ka xumahay dhac dadaan lkiin wax kale maaha waa sunta aay bada ku shu bayaan wada mada war shadaha ku hor maray sida reer gal beedka iyo wixii lamida aloow noo shal
Ku: dhaqaatirta reer bosasood
isku daya in aad bartaa kaluunka waxa u la soo caariyay
hadii eeydan awood u laheeyn qaboojiye ku rida isla markaasna waxaad la kaashan kartaan qurba joogta si loogu soo baaro waxa keenay in uu soo caariyo kaluunka intaas le’eg
waxaan hadii aan dabagal lagu sameeyn mustaqbalka waxeey yeelan kartaa sameeyn balaaran